Chloe Smith Zvinyorwa pamusoro Martech Zone |
Zvinyorwa na Chloe Smith
Chloe Smith mubatsiri wezve bhizinesi uye munyori wenguva-wenguva anogara achida kugovana zvidimbu zvemazano. Iye anotenda kuti kuda, kushinga uye, pamusoro pezvose, ruzivo rwunobereka budiriro. Paanenge asiri kushanda, angangove kune imwe nzvimbo akafukidzwa nebhuku rakanaka, uye kapu yeti lemongrass tii (kana kutendeseka kudhakwa-kutarisa iyo nyowani yeNetflix hit show).
Ndeapi matanho epamusoro eSawa Platforms Ekukura
Chitatu, July 24, 2019 Chitatu, July 24, 2019 Chloe Smith
Ndeipi yako yekutanga nhamba yekutarisa sekambani yeSawaS? Kukura, hongu. Kubudirira kwedenga kunotarisirwa kubva kwauri. Zvakakosha kuti urarame kwenguva refu: Kunyangwe kana software software iri kukura pa60% pagore, mikana yayo yekuve mabhiriyoni emadhora hofori haisi nani kupfuura 50 / 50. McKinsey & Kambani, Kukura nekukurumidza kana Kufa Mwedzi Unononoka pamusoro pemwedzi. kukura kunokosha kuvhara kurasikirwa kubva kumakambani eChurn SaaS anowanzoitika. Kukunda zvinotarisirwa uye
6 Nzira Munzira Dzemagariro Zviratidzo Kuvandudza Chinzvimbo
Muvhuro, Zvita 17, 2018 Chitatu, December 19, 2018 Chloe Smith
Zviratidzo zvezvemagariro zvinomiririra kudyidzana, senge retweets, kufarira, uye mavhoti, evashandisi venhau vezvenhau vane chiratidzo chako, izvo zvinoratidza mukurumbira wayo nehunhu hwekutsvaga injini. Google, Bing, Yahoo, uye mamwe mainjini ekutsvaga anoshandisa mamwe maalgorithms kuona chinzvimbo chemibairo yekutsvaga. Iko kunokonzeresa kwemasocial siginicha pane mhedzisiro yealgorithms ndeyekufungidzira kwechero munhu, nekuti maalgorithms enjini dzekutsvaga anodzivirirwa kuburikidza nezvibvumirano zvisiri zvekuzivisa. Nekudaro, vezvenhau pasina mubvunzo ndiyo